Daawo Sawirada: Shaqsiyadda Ninkii ka dambeeyay Dilkii loo Gaystay Safiirka Ruushka Ee Turkiga oo la aqoonsaday – Tusmoonline.com
Daawo Sawirada: Shaqsiyadda Ninkii ka dambeeyay Dilkii loo Gaystay Safiirka Ruushka Ee Turkiga oo la aqoonsaday
Wararka	December 20, 2016	150	Like
Waxaa la aqoonsaday Shaqsiyada ninkii xalay magaalada Ankara ee caasimada dalka Turkiga ku dilay Safiirka dowlada Ruushka u fadhiya dalka Turkiga, dilkan ayaana noqday mid si weyn looga hadal hayo caalamka oo idil.
Ninka dilka geesay oo ahaa nin dhalinyaro ah ayaa markii uu dilka geesay si cabsi la’aan ah waxa uu uga hormuuqday Kaamiradaha, waxa uuna ninkan ku dhawaaqayay “Allaahu Akbar, Hadii aad Aleppop dad ku dishan adinkana halkan ayaa la idinku dilayaa iyo Ereyo ale.
Waraahinta dalka Turkiga ayaa sheegay in ninka dilka geestay lagu magacaabo Mevlut Mert Aydintas, oo 22-jir, waxaana ninkan uu katirsanaa ciidanka booliiska dalka Turkiga gaar aaan kuwa loogu tala galay kahor taga rabshadaha.
Wasiirka Arimaha gudaha dalka Turkiga Mr.Suleyman Soylu oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheeay in ninka dilka geesay uu katirsanaa ciidanka booliiska balse shaqada uu fasax ka qaatay labo sano kahor.
Ninkan dilka geestay ayaa iska soo dhigay ilaalada gaarka ah ee dadka madaxda ah, waxa uuna ninkan hoolka uu kasocday bandhig sawirada farshaxanka lagu soo bandhigayay kusoo galay kaarka aqoonsiga boliiska, isagoona ugu dambeyn iyada oo la daawanayo toogtay Safiirka Turkiga u fadhiyay Ruushka.